267s Ukwenza inkulungwane ye-9 ye-Iraq lustreware replica images and subtitles
NdinguAndrew Hazelden kwaye ndingumbumbi ngaphezulu kweminyaka engama-30. Ndicinga ukuba yeyona nto inomdla kunye ne-luster kwimbali kukuba babedala igolide kwinto engeyogolide kwaye babecingelwa ukuba ngoochwephesha. Uziva ngathi ungalahleka ngaphakathi ngokujonga ukuvutha kwebhotile yedaka ekwenza ukuba ucinge ukuba ukwelinye ilizwe. I-luster yinkqubo apho usebenzisa i-iron sulphides ukwenza umphezulu ongafakwanga embizeni. Yindlela efihlakeleyo kakhulu kwaye entsonkothileyo. Le isitya ikopi kwisitya se-9 se-Iraq. Ndiyisebenzisile ekwenzeni le isitya yodongwe oluvela e-Italiya esuka eDeruta ngumbala we-buff. Nditsho ndithatha ibhola yodongwe ngaphezulu nje kweekhilogramu ubunzima kwaye kuphoswa ivili lombumbi kwaye kungathatha imizuzu emihlanu ukuphosa ubume. Kushiywe ziintsuku ezimbalwa ukufumana ubunzima besikhumba. Xa sele ilukhuni isikhumba iguqulwe kwaye inyawo liguqukile. Nje ukuba iinyawo zijike isitya kufuneka somiswe ngokupheleleyo elangeni emva koko ibe kukudubula kwayo kokuqala eyokungxolwa kwebhiskithi emva koko ithathiwe kwaye igxunyekwe kwi-glaze emhlophe eyintloko ye-tin oxide ukuyenza mhlophe emva koko iphinde idutyulwe. Inkqubo elandelayo ukuyipenda nge-luster pigment. I-pigment endiyisebenzisayo ukupeyinta le isitya yenziwa ikakhulu nge-sulphide yobhedu kodwa ikwanayo nesilivere kuyo kwaye iyakwenziwa nge-oxide ebomvu kunye nodongwe. Emva koko ibaliwe ukuze ifuduselwe malunga neqondo lobushushu - 650 centigrade. Emva kokubalwa kuthatyathwe kwaye emhlabeni kunye kwaye ke ixutywe neviniga kwangelo xesha ipeyintiweyo. Uyilo lwamachaphaza lwakhutshwa kule isitya se-9 se-Iraq. Ngapha koko indlela yokufumanisa ukuba yeyiphi ibrashi ababeyisebenzisa kwaye bezama ukusebenzisa ibhulashi efanayo. Ukudubula kweleta kudinga i-kiln enamandla okunciphisa ioksijini uzama ukudala imeko apho kungekho oxygen enciphisa ii-pigment zikhuphe isilivere kunye nobhedu. Udala umsi Indlela endenza ngayo le nto kukuthumela iziqwenga ezincinci zeenkuni kwi-kiln ngokusebenzisa umgodi wokuhlola kwaye ikhupha ioksijini. Emva koko uvumela ioksijini ukuba ibuyele ithutyana ukuze icoce igumbi kwaye ukuba i-oxidation kunye nokunciphisa i-spasm kubalulekile ukudala ukungahambi kakuhle embizeni. Xa imbiza iphuma kwi-luster kiln isejongeka ngathi yimbumba nje egqunywe kudongwe ke kuya kufuneka ukuba uyihlikihle i-ocher nge-abrasive. Uya kwazi ke ukuba ukudubula kuqhumile kusebenze okanye akwenziwanga kuba xa sele usebenzile uzoqala ukubona ubomvu iridescent okanye isilivere. Ke elona candelo lomlingo kukuzisusa kwiimbiza emva kokudubula Awuke uqiniseke ukuba kuyakwenzeka ntoni kwaye iziphumo azicingeli kodwa kukungabi njalo okubonakala ngathi kububomi bayo. Kuya kufuneka ngamanye amaxesha ulayishe imbiza uye kwicala lokukhanya ukuze ubone ukungafakwanga ke kuxhomekeke kwikona oyibambe embizeni kuxhomekeke ekubeni uyayibona iridescence okanye hayi. Ke kuyabonakala ukuba iyinto engaqondakaliyo ukuba yenzeka
Ukwenza inkulungwane ye-9 ye-Iraq lustreware replica
< start="7.76" dur="5.24"> NdinguAndrew Hazelden kwaye ndingumbumbi ngaphezulu kweminyaka engama-30. >
< start="13" dur="3.96"> Ndicinga ukuba yeyona nto inomdla kunye ne-luster kwimbali >
< start="16.96" dur="2.42"> kukuba babedala igolide >
< start="19.38" dur="2.2"> kwinto engeyogolide >
< start="21.58" dur="2.8"> kwaye babecingelwa ukuba ngoochwephesha. >
< start="24.38" dur="1.92"> Uziva ngathi ungalahleka ngaphakathi >
< start="26.3" dur="2.96"> ngokujonga ukuvutha kwebhotile yedaka >
< start="29.26" dur="5.4"> ekwenza ukuba ucinge ukuba ukwelinye ilizwe. >
< start="34.66" dur="5.28"> I-luster yinkqubo apho usebenzisa i-iron sulphides >
< start="39.94" dur="4.8"> ukwenza umphezulu ongafakwanga embizeni. >
< start="44.74" dur="4.06"> Yindlela efihlakeleyo kakhulu kwaye entsonkothileyo. >
< start="48.8" dur="6.14"> Le isitya ikopi kwisitya se-9 se-Iraq. >
< start="54.94" dur="7.92"> Ndiyisebenzisile ekwenzeni le isitya yodongwe oluvela e-Italiya esuka eDeruta >
< start="62.86" dur="4.8"> ngumbala we-buff. >
< start="67.66" dur="1.46"> Nditsho ndithatha ibhola yodongwe >
< start="69.12" dur="4.48"> ngaphezulu nje kweekhilogramu ubunzima kwaye kuphoswa ivili lombumbi >
< start="73.6" dur="7.2"> kwaye kungathatha imizuzu emihlanu ukuphosa ubume. >
< start="80.8" dur="4.58"> Kushiywe ziintsuku ezimbalwa ukufumana ubunzima besikhumba. >
< start="85.38" dur="4.33"> Xa sele ilukhuni isikhumba iguqulwe kwaye inyawo liguqukile. >
< start="89.71" dur="5.77"> Nje ukuba iinyawo zijike isitya kufuneka somiswe ngokupheleleyo elangeni >
< start="95.48" dur="5.12"> emva koko ibe kukudubula kwayo kokuqala eyokungxolwa kwebhiskithi >
< start="100.6" dur="4.54"> emva koko ithathiwe kwaye igxunyekwe kwi-glaze emhlophe >
< start="105.14" dur="3.689"> eyintloko ye-tin oxide ukuyenza mhlophe >
< start="108.829" dur="3.651"> emva koko iphinde idutyulwe. >
< start="112.48" dur="4.16"> Inkqubo elandelayo ukuyipenda nge-luster pigment. >
< start="116.64" dur="7.26"> I-pigment endiyisebenzisayo ukupeyinta le isitya yenziwa ikakhulu nge-sulphide yobhedu >
< start="123.9" dur="4.46"> kodwa ikwanayo nesilivere kuyo >
< start="128.36" dur="4.86"> kwaye iyakwenziwa nge-oxide ebomvu kunye nodongwe. >
< start="133.22" dur="6.96"> Emva koko ibaliwe ukuze ifuduselwe malunga neqondo lobushushu - 650 centigrade. >
< start="140.18" dur="3"> Emva kokubalwa kuthatyathwe kwaye emhlabeni kunye >
< start="143.18" dur="6.72"> kwaye ke ixutywe neviniga kwangelo xesha ipeyintiweyo. >
< start="150.12" dur="6.06"> Uyilo lwamachaphaza lwakhutshwa kule isitya se-9 se-Iraq. >
< start="156.18" dur="4.6"> Ngapha koko indlela yokufumanisa ukuba yeyiphi ibrashi ababeyisebenzisa kwaye bezama ukusebenzisa ibhulashi efanayo. >
< start="160.78" dur="6.15"> Ukudubula kweleta kudinga i-kiln enamandla okunciphisa ioksijini >
< start="166.93" dur="3.59"> uzama ukudala imeko apho kungekho oxygen >
< start="170.52" dur="5.68"> enciphisa ii-pigment zikhuphe isilivere kunye nobhedu. >
< start="176.2" dur="1.46"> Udala umsi >
< start="177.66" dur="6.96"> Indlela endenza ngayo le nto kukuthumela iziqwenga ezincinci zeenkuni kwi-kiln ngokusebenzisa umgodi wokuhlola >
< start="184.62" dur="2.84"> kwaye ikhupha ioksijini. >
< start="187.46" dur="4.68"> Emva koko uvumela ioksijini ukuba ibuyele ithutyana ukuze icoce igumbi >
< start="192.14" dur="9.069"> kwaye ukuba i-oxidation kunye nokunciphisa i-spasm kubalulekile ukudala ukungahambi kakuhle embizeni. >
< start="201.5" dur="5.129"> Xa imbiza iphuma kwi-luster kiln isejongeka ngathi yimbumba nje >
< start="206.629" dur="2.351"> egqunywe kudongwe >
< start="208.98" dur="8.82"> ke kuya kufuneka ukuba uyihlikihle i-ocher nge-abrasive. >
< start="217.8" dur="5.4"> Uya kwazi ke ukuba ukudubula kuqhumile kusebenze okanye akwenziwanga >
< start="223.2" dur="4.4"> kuba xa sele usebenzile uzoqala ukubona ubomvu iridescent okanye isilivere. >
< start="227.6" dur="5.43"> Ke elona candelo lomlingo kukuzisusa kwiimbiza emva kokudubula >
< start="233.03" dur="5.51"> Awuke uqiniseke ukuba kuyakwenzeka ntoni kwaye iziphumo azicingeli >
< start="238.54" dur="5.6"> kodwa kukungabi njalo okubonakala ngathi kububomi bayo. >
< start="244.18" dur="7.1"> Kuya kufuneka ngamanye amaxesha ulayishe imbiza uye kwicala lokukhanya ukuze ubone ukungafakwanga >
< start="251.28" dur="2.819"> ke kuxhomekeke kwikona oyibambe embizeni kuxhomekeke ekubeni >
< start="254.099" dur="2.421"> uyayibona iridescence okanye hayi. >
< start="256.52" dur="7.42"> Ke kuyabonakala ukuba iyinto engaqondakaliyo ukuba yenzeka >